PartnerStack: Lawula amahlakani akho, abaThengisi kwakhona, kunye namaQabane | Martech Zone
Umhlaba wethu yidijithali kwaye ngakumbi kobo budlelwane kunye nokuzibandakanya kuyenzeka kwi-Intanethi kunangaphambili. Nkqu neenkampani zemveli zihambisa intengiso yazo, inkonzo, kunye nokuzibandakanya kwi-intanethi… yinto eqhelekileyo yesiqhelo ukusukela kubhubhane kunye nokutshixeka.
Ukuthengisa ngamazwi ngomlomo yinto ebaluleke kakhulu kwishishini ngalinye. Ngokwesiko lesiNtu, olo dluliselo lunokungasebenzi kakuhle… kudluliswa inombolo yomnxeba okanye idilesi ye-imeyile yomntu osebenza naye kunye nokulinda ifowuni ukuba ikhale. Kwilizwe ledijithali, ubudlelwane namaqabane akho bunokuphathwa, bulandelelwe, kwaye benziwe kwi-intanethi ngokusebenza kakuhle.
Yintoni uLawulo lobuDlelwane bamaQabane (PRM)?
Ulawulo lobudlelwane bamaqabane yinkqubo yeendlela, izicwangciso, amaqonga, kunye nezakhono ezisekwe kwiwebhu ezinceda umthengisi ukulawula ubudlelwane bamaqabane. Abalingani banokubandakanya abanye abathengisi, abathengisi abaphezulu kunye nabaphantsi, abathengisi ababambiseneyo kunye nabathengisi kwakhona.
Iinkqubo zamaqabane ziguqula iiarhente, abathengisi kwakhona, kunye nabathengisi abasele bezithengisela abathengi bakho abafanelekileyo kulwandiso lweqela lakho lokuthengisa. Kungenxa yoko le nto iinkampani ezikhula ngokukhawuleza ze-SaaS zisebenzisa ubuhlakani ukuqhuba ukufunyanwa, ukugcinwa, kunye nengeniso, ngaphaya kwento enokwenzeka yedwa.
IqabaneStack liqonga loLawulo loBudlelwane bamaQabane kunye nendawo yentengiso. I-PartnerStack yenza okungaphaya kokulawula ubuqabane bakho-yakha amajelo amatsha erhafu ngokuxhobisa onke amaqabane ukuba aphumelele.
I-PartnerStack kuphela iqonga lolawulo lwamaqabane yenzelwe ukukhawulezisa ingeniso ephindaphindayo yezo nkampani zombini kwaye amaqabane asebenza nawo-kuba impumelelo yamaqabane akho yeyakho. Iimpawu kunye nezibonelelo zibandakanya:
Ukulinganisa iindlela ezininzi Nokuba ujonge ukuvala ezinye izivumelwano, ukuvelisa ngakumbi ukukhokelela okanye ukuzisa ukugcwala kwiphulo lakho elilandelayo, iPartnerStack yakhelwe ukuphatha lonke uhlobo lwentsebenziswano- kwaye zonke ngaxeshanye.
Landa amakhonkco amaqabane, akhokele, kwaye ujongane ngaphakathi kweQabane
Shumeka iinkqubo zokunyaniseka kwabathengi ngqo kwimveliso yakho
Thengisa ngokuthe ngqo kuthungelwano lwabasasazi nge-PartnerStack API
Khulisa ukusebenza kweqabane - Iinkqubo ezibeka phambili uthethathethwano zivelisa ingeniso ethe kratya. I-PartnerStack ikunceda ukuba wenze amava esiko kwitshaneli nganye yamaqabane akho, ukhulise amaqabane amatsha kubadlali abaphambili.
Yenza amaqela amaqabane aneempawu ezizodwa zomvuzo kunye nomxholo
Ngokuzenzekelayo ukubamba iqabane kwiifom zesiko kunye nokuhamba kwe-imeyile
Ukubamba iiasethi zokuthengisa amaqabane ngaphakathi kwiideshibhodi zeqabane lakho
Yenza iintlawulo zeqabane lakho Esona sizathu sixhaphakileyo iinkampani ezihambisa inkqubo yazo kwi-PartnerStack: badiniwe kukuchitha ixesha ukuqinisekisa ukuba amaqabane ahlawulwa inyanga nenyanga. I-PartnerStack ikuhlawulela amaqabane.
Fumana i-invoyisi yenyanga enye, ehlawulwe ngekhadi letyala okanye nge-ACH
Amaqabane arhoxisa eyabo imivuzo ngeStripe okanye ngePayPal
Thobela imigaqo yelizwe kwaye unike amaqela ezemali ukubonakala
Sisebenzisa PartnerStack ukunika amandla ukuhanjiswa kwabathengi, abaxhasi kunye nabathengisi kwakhona. Yisisombululo sokumisa esinye sokukhwela kwiqabane, ukwenza kusebenze, ukubhatalwa kunye nazo zonke iimfuno zethu zomlawuli; uhlaziyo oluhlaziyayo kubume beetekhnoloji yeqabane esele likho.
UTy Lingley, uMlawuli oyiNtloko weNtsebenziswano
Indawo yentengiso yeQabaneStack
I-PartnerStack inendawo yentengiso esebenzayo kunye nekhulu leenkampani ezisebenzisa isoftware yazo, eyenza ukuba amaqabane (njengam) akhangele kwaye achonge amathuba okukhuthaza izixhobo ezikhulu. Banesoftware kwii-verticals ezininzi-kubandakanya uLuntu, ukuthengisa, ukuthengisa, ukubalwa kwemali, uphuhliso, imveliso, imidiya yoluntu kunye nokunye.
Bhukisha iDemo yeQabaneStack namhlanje
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye IqabaneStack!
tags: iqonga lolawulo lobulunguurhwebo umanyanisoiqonga lobulunguulawulo lweqabaneiqonga lolawulo lwamaqabaneulawulo lobudlelwane bamaqabaneiqabaneinyusaulawulo lokuthunyelwaulawulo lweqabane lokudluliselaiqonga lokudluliselaIqonga lolawulo lomthengisiIqonga lomthengisi kwakhonaii-saasyintoni prm
Ukuqinisekiswa kwe-imeyile kunye nokuQinisekiswa